किन आउँछ ओठ र जि`ब्रोमा घा`उहरु ? यी समस्या हटाउने घरेलु उपचार..! जान्नु होस – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/किन आउँछ ओठ र जि`ब्रोमा घा`उहरु ? यी समस्या हटाउने घरेलु उपचार..! जान्नु होस
किन आउँछ मुखमा घाउ-खटिरा ?
खासगरी शरीरमा पोषणको कमी (भिटामिन बी, सी, आइरन, प्रोटिनलगायत भोजनमा रेसादार खानाको कमी आदि) ले मुखमा घाउ हुन्छ । यसरी नै दाँत नमाझ्ने, खाना खाएर कुल्ला नगर्ने जस्ता सरसफाइको कमी, पेटसम्बन्धी रोगहरू (कब्जियत, ग्यास्ट्राइटिस वा अम्लपित्त, अपच आदि), पानीको कमी भएमा पनि मुखभित्र खटिरा आउने गर्छ।
त्यस्तै, खाद्य विषाक्तता, सुर्ती-पानमसला, मद्यपान र धूमपान गर्ने, ब्याक्टेरिया तथा फङ्गसको संक्रमण, बढी तातो र मसलाहरू वा बढी अम्ल भएको खानपान गर्दा मुखभित्र र वरपर घाउ आउने गर्छ ।
मनतातो पानीमा फिटकिरी मिसाएर दिनमा ३ पटक कुल्ला गर्ने । पानी प्रशस्त पिउने तर बढी चिसो वा तातो नपिउने, हरियो सागपात तथा फलफूलहरु मजाले चपाएर खाने , बढी चिल्लो नखाने, हल्का उम्रेको गेडागुडी बिहान र बिहान खाने , पानीमा तुलसीको पातको रस राखेर कुल्ला गर्ने , बदाम भिजाएर खाने
मह घाउमा लपक्क लगाउने , निमको पात चपाउने वा निम मिलाइएको मन्जनले दाँत माझ्ने , जिरा वा खयर चपाउने यसरी पनि निको नभए डाक्टरलाई देखाउन।
दूध पिइसके पछि बिर्सिएर पनि नगर्नुहोस् यी काम, नत्र भोग्नुपर्नेछ यसको परिणाम